ပန်ဒိုရာ: February 2008
သီလမစောင့် အူမ မတောင့်
အပြုံးတွေအေးစက် သူစိတ်ပျက်သွားသလား လို့
မြင်လိုက်ရ ကြားလိုက်ရ ပြောလိုက်ရ
မျက်နှာကြီးထဲက နား မျက်လုံး ပါးစပ်တွေလည်း
အဲဒီ ခေါင်း မပါတော့တဲ့
(ခေါင်းကိုက်နေတုန်း ရေးမိရေးရာ ရေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
Posted by pandora at 10:18 PM 14 comments
Posted by pandora at 12:44 PM 10 comments
(သူများတွေ ဖန်တီးထားတဲ့ ကဗျာ၊ ၀တ္တု၊ ပန်းချီကား၊ ရုပ်ရှင် စတာတွေအပေါ်မှာ ကိုယ်ထင်ရာမြင်ရာ ရေးထားချက်များကို အရင်က လေဘယ်လ် အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး ဘယ်လိုခွဲရမှန်းမသိခဲ့။ အခုတော့ review ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ စုထားလိုက်ပါတယ်။ ပြန်ဖတ်ချင်ရင် ဒီကနေ သွားနိုင်ပါတယ်။)
Posted by pandora at 3:20 PM 14 comments
ဟဲလို .. ဟဲလို..
တခါတလေတော့ လိုအပ်ခံချင်တာကို ...။
ဘယ်တော့မှ နောင်တ မရစေရ
နတ်သမီးများ နဲ့ …
စ… လယ်.. ဆုံး
Posted by pandora at 1:29 AM5comments
သင်းပျံ့တဲ့ နံနက်ခင်းတွေပဲ ရှိတယ်ဆိုပါစို့
ဟိုဝေးဝေးမှာ မြင်နေရတဲ့ တောင်တန်းတွေလို
မျက်နှာပေါ်က ရေစက်ရေပေါက်တွေရဲ့ ဟိုမှာဘက်ကို
သူက မင်းကိုသာ လန်းဆန်းစေမယ်ဆိုရင်
လက်ညိုးညွှန်ရာ နံနက်ခင်းပဲ ဖြစ်စေချင်သေးသတဲ့...။
Posted by pandora at 8:01 PM4comments
ဖေဖေါ်ဝါရီလ အတွက် စာပန်းချီ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၂ ထွက်နေပါပြီ။ ပန်ဒိုရာရဲ့ ပို့စ်ဟောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Identity ၀တ္တုတိုကလေးကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ သရုပ်ဖော်ပုံလှလှလေး ဆွဲပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လာအကြောင်းကြားချိန်မှာ အချိန်မရတော့လို့ စာဟောင်းကိုပဲ ပေးလိုက်ရပါတယ်။ နောက်ကိုတော့ အဲဒီလို အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်းတွေအတွက်ဆိုရင် ဘလော့ဂ်မှာ မဖေါ်ပြရသေးတဲ့ စာမူတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပေးပို့သွားပါမယ်။
တခြား ဘလော့ဂါများရော ဘလော့ဂါမဟုတ်သူ စာရေးဆရာများရောရဲ့ စာကောင်း ကဗျာကောင်းများနဲ့ စုစည်းထားတဲ့ စာပန်းချီကို အားပေးချင်ရင် ဒီမှာ အွန်လိုင်းဗားရှင်း နဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ဗားရှင်း ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်က မောင်နှမတွေ အတူတူကစားကြရင်း အချိန်နည်းနည်း ကြာလာလျှင် ဆူညံဆူညံ အငြင်းအခုန် ဖြစ်လာတတ်သည်။ အဲသည်လို အခါမျိုးမှာ သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် “မေမေရေ ဖေဖေရေ ဒီမှာ သားကို သမီးကိုလေ ဘယ်သူက ဘာလုပ်နေတယ်” စသည်ဖြင့် တိုင်ရသည်ကိုက အရသာ။ ကြာတော့ မေမေက နားငြီးလာပြီး “တော်ကြစမ်းပါဟယ် နားပူလိုက်တာ” ဟုဟန့်သည်။ ဖေဖေက “သြော် ကလေးတွေ နေကြပါစေ” ဟု မေမေ့ကိုဟန့်။ အဲသည်လို ပြဿနာ ရှာပြီးတော့မှ အားလုံး တဟီးဟီး။ အခုလည်း လူကြီးဖြစ်လာသည်အထိ မောင်နှမတွေ စုမိလျှင် အသံသေးအသံကြောင်ဖြင့် လုပ်ကြံကာ အပြိုင်အော်တိုင်ရင်း မေမေ့ကို နားမခံနိုင်အောင် စကြသည်။ ဖေဖေကတော့ သဘောတွေ ကျလို့။
တိုင်သည် ဆိုသည်က အားကိုးခြင်း တစ်မျိုးပေပဲ။ တိုင်သည် သို့မဟုတ် တိုင်ကြားသည် ဆိုသည့်စကားက တိုင်တည်သည် ဆိုသည်ထက်ကို ပိုသည်။ တိုင်တည်ခြင်း ဟူသော အသိပေးရုံ ဖွင့်ဟပြောရုံ သက်သက် မဟုတ်။ အရေးယူမှု တစ်ခုခုကို မျှော်လင့်သည့်သဘော။ တိုင်ကြားမှုကို လက်ခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုခု ရှိလို့သာဖြစ်မည်။ နို့မို့ဆိုလျှင် ဘာလုပ်ဖို့ တိုင်နေမှာလဲ။
လူတို့နေ့စဉ် ပုဂ္ဂလိက အဆင့်တွင်လည်း အားကိုးနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြား ဥပမာများစွာ။ မိန်းကလေးတွေ အိမ်ထောင်ပြုတာ အားကိုးချင်လို့ ဆိုသောစကားရှိသည်။ အတော်များများ အတွက် မှန်ကန်ပါသည်။ ယောင်္ကျားသားများကလည်း အားကိုးခံချင်သည် မဟုတ်ပါလား။ သို့သော် အားကိုးဟူသော စကားလုံးနောက်ဝယ် တာဝန် ဆိုသည်က တွဲပါလာသည်။ အလုပ် ဆိုသည်က တွဲပါလာသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တကယ်အားကိုးလောက်ဖွယ် ဖြစ်မဖြစ်က အရေးကြီးသည်။
အားကိုးသည် စစ်ကူခေါ်ခြင်း အနေအထားလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ လူနှစ်ယောက်ကြားမှာ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပြီဆိုပါတော့။ နှစ်ဦးစလုံး ပြေလည်မည့် နည်းလမ်းဖြင့် သူတို့အချင်းချင်း ဘယ်လိုမှ ညှိနှိုင်းမရတော့ဘူး ဆိုလျှင် အားနည်းသူက တတိယလူကို အားကိုးရှာမည်။ အားကြီးသူကတော့ သူအားသာနေလျှင် အနိုင်သာဆက်ယူမည်။ မပြေလည်ချင်သော အားကြီးသူသည် တတိယလူ ပါလာသည်ကို ကြိုက်လာစရာ အကြောင်းမရှိ။ အဖေကျော် ဦးရီးတော်မလွမ်းနှင့် ဟုပြောကောင်းပြောမည်။ သို့သော် တတိယလူ(များ) ကလည်း ဘယ်လောက် အားကိုးလောက်ပါသလဲ။
မကြာမီက ရုပ်ရှင်တစ်ကား ကြည့်မိသည်။ Hotel Rwanda ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ထုတ်သော ကားဖြစ်သည်။ ရ၀မ်ဒါ နိုင်ငံတွင် ၁၉၉၄ က ဖြစ်ခဲ့သော လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုကြီး၏ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံကာ ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက် အကြောင်းကို လိုက်ဖတ်ဖူးခဲ့ documentary များကို ကြည့်ဖူးခဲ့ ခံစားဖူးခဲ့သော်လည်း ဤရုပ်ရှင်ကို မကြည့်ဖြစ်ခဲ့။
အဓိကဇာတ်လိုက်က ဟိုတယ်မန်နေဂျာ Paul Rusesabagina အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သော မင်းသား Don Cheadle ဖြစ်သည်။ ရ၀မ်ဒါရှိ ဟူတူလူမျိုးများက တွတ်ဆီ လူမျိုးများကို မျိုးတုံး လိုက်လံ သတ်ဖြတ်နေစဉ် ဟိုတယ် တစ်ခုထဲသို့ ခိုလှုံလာသော တွတ်ဆီ လူမျိုး တစ်ထောင်ကျော်ကို ဟိုတယ်မန်နေဂျာက ဦးဆောင်ကာ အသက်ရှင်အောင် ကယ်သွားနိုင်သော ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ စီဒီချပ်ပေါ်တွင် သည်လိုရေးထားသည်။
ဇတ်လမ်းထဲမှာ မှတ်သားစရာ စကားတချို့မှာ -
မန်နေဂျာနှင့် သတင်းဓာတ်ပုံသမားတို့ ပြောကြပုံ။
သင်ခန်းစာကတော့ သည်လိုရသည်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးမှ ဖတ်လျှင်တော့ ပိုနားလည်မည်။
မန်နေဂျာသည် ဟိုတယ် ပြင်ပတွင် မရေမတွက်နိုင်အောင် အသတ်ခံရသူများ ရှိမှန်း သိသည်။ သူလည်း စိတ်မကောင်းပါ။ သို့သော် ပြင်ပလူများကိုပါ သွားကယ်ချင်တာမျိုး မလုပ်။ သူကိုယ်တိုင်တွင် အန္တရာယ် ရှိမှန်းလည်း သိသည်။ မနိုင်ဝန်ကို မထမ်း။ သူ့ဟိုတယ်တွင် ခိုလှုံနေသူများကို အသတ်မခံရရန် သူတတ်နိုင်သလောက်ကို အကောင်းဆုံး လုပ်သွားသည်။
လိုအပ်သောအချိန်တွင် ပြောရေးဆိုခွင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ (mandate) ကို ရသည့်နည်းဖြင့် ရဲရဲယူသည်။ ဟိုတယ် ၀န်ထမ်းများက သူ့ပြောစကား နားမထောင်သောအခါ ဌာနချုပ်မှ လိုအပ်သည့်စာကို ရအောင်ယူပြီး အားလုံးကို လိုက်နာရန် စီမံသည်။
ပထမပိုင်းက ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေး တပ်များထံမှ လုံးလုံးလျားလျား အကူအညီ ရမလား ဟု အလွန် မျှော်လင့်မိသည်။ နောက်တော့ မကယ်နိုင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂနှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းများ လူဖြူများကိုသာ လာကယ်ထုတ်မည် ဆိုသည်ကို သိရသည်။ သူတို့ကို မကယ်နိုင်။ စိတ်ဓာတ်ကျစရာ အခြေအနေများ သဘောထားများကို သူလက်ခံလိုက်ရသည်။ သို့သော် ရပ်မနေ။ ထိရောက်သော အားကိုးရရန် နည်းလမ်းဆက်ရှာသည်။
ကိုယ့်အခြေအနေကို ကိုယ်သိသည်။ ရန်သူက အားကြီးလွန်းနေသည်။ လက်နက်လည်း ရှိသည်။ ခံတိုက်ရန် ဆိုသည်မျိုးက မဖြစ်နိုင်မှန်း နားလည်သည်။ သူ မကြိုးစားပါ။ သို့သော် ကြောက်လွန်းလို့ ဘာမှ မလုပ်တတ် မကိုင်တတ် ဖြစ်လောက်အောင်မျိုး သွေးပျက်ခြင်းလည်း မရှိ။
မိမိသိသော နိုင်ငံခြားမှ အားကိုးလောက်သည့် မိတ်ဆွေများကို လာကယ်အောင် ဖုန်းဆက်ရန်အတွက် လူများကို အကြံပေးသည်။ တာဝန် ခွဲဝေပေးသည်။ လူအများကို လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ရုန်းကန်ကြစဉ်အတွင်း မိမိကိုယ်ပိုင် အသီးသီး လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ရပ် အနေဖြင့် စိတ်ဓာတ် (sense of ownership) သွင်းပေးသည်။ မျှော်လင့်ချက် သွင်းပေးသည်။
မိမိတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ် (resources) များကို လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင်သည်။ ဟိုတယ်ရှိ ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းများကို သုံးကာ ဆက်သွယ်သည်။ ရိက္ခာများ မပြတ်လတ်အောင် စီမံသည်။ ရဲကိုလာဘ်ထိုးရန် လိုသည့် ရွှေငွေ အရက် ရအောင်ရှာသည်။
လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လတ်တလော အရေးကြီးလျှင် အရေးကြီးသလို ရဲ ကဲ့သို့ လူမျိုးကိုလည်း ပေါင်းသည်။ စိတ်တူသဘောတူ ဖြစ်နေ၍တော့မဟုတ်။ သိပ်လည်း ဖြစ်စရာ မလိုအပ်။ သူဘာလိုချင်သလဲ ဘာနှင့်လဲလှယ်လျှင် ကိုယ်လိုချင်တာ ရမလဲ။ သူ့အကျိုးစီးပွား ကိုယ့်အကျိုးစီးပွား (interest) ကို သဘောပေါက်သည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ရှင်သန်လိုစိတ် နှင့် သည်လိုမှ နည်းလမ်းမရှာလျှင် ကျလာမည့် ကြီးမားသော အန္တရာယ်ကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်ကို အန္တရာယ်ဟု မမြင်လျှင် လွတ်မြောက်စရာ မရှိ။ မြင်သော်လည်း ရှင်သန်လိုစိတ် လွတ်မြောက်လိုစိတ် မပြင်းထန်လျှင် ထိရောက်သော အားထုတ်မှု မလုပ်နိုင်။
ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားကိုးပါ ဆိုသော စကားတွေရှိသည်။ မိတ်ဆွေကောင်းရှိလျှင် အရာများ ပြီးမြောက်သည် ဆိုသည်လည်းရှိသည်။ ကလျာဏမိတ္တ သံဝရ (စာလုံးပေါင်းမှားလျှင် ပြင်ပေးပါ။) ဟုဘုရားက ဟောခဲ့သည်ဟု မှတ်သားဖူးသည်။ ကိုယ်ပိုင်အားနှင့် သူများဘေးဘီက အား ဘယ်သည်က ပိုအရေးကြီးသလဲ။ Primary အားနှင့် Secondary အားဟု ခွဲတာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ Primary က အတွင်းမှာဆိုလျှင် Secondary က အပြင်မှာဖြစ်မည်။ နှစ်ခုလုံးတော့ အရေးကြီးမည်။ ဘာကိုမှ ပစ်ချလို့မရ။ အပြင်အားကို အလေးမထားလျှင် အတွင်းက တာဝန်ပိုလာမည်။ စွန့်စားမှု ကြီးမားလာမည်။ အတွင်းအားကို အလေးမထားလျှင် အပြင်ကလည်း လျော့ရဲလာမည်။ လိုရာကို မရောက်နိုင်။
သည်တော့ အလွန်ရှုပ်ထွေးသော ဖြစ်စဉ်။ ထည့်တွက်ရတာတွေကလည်း များလှသည်။ တကယ့် လောက်လောက်လားလား အားကိုးတစ်ခု ရသည်ဆိုသည်က မလွယ်။ သည်စာကိုတောင် ရေးရင်းနှင့် လန့်လာမိသည်။ တရားဟောသလိုလို ဆရာလုပ်သလိုလိုများ ဖြစ်နေလေရော့သလား။ နိုင်ငံရေးတွေ ဘာတွေများ ဆန်နေရော့သလား။ သည်လောက်နှင့် ရပ်လျှင် ကောင်းမည်။ ဘယ်သူ့အားကိုးနှင့် ဒါမျိုးတွေ ရေးရဲနေသလဲ ဟုမေးလာလျှင် ကိုယ့်မှာက အဖြေမရှိ။
Posted by pandora at 1:37 AM7comments
နှင်းဆီပွင့် နဲ့ ချောကလက်ချိုခါး သိင်္ဂါရမွှမ်းထားတဲ့ စိတ်ကူးလှလှ ဗယ်လင်တိုင်း
တီတီတာတာစုံတွဲတြွေကား အားကျပျော်ရွှင် မုဒိတာဝင်တဲ့ ဗယ်လင်တိုင်း
တစ်ယောက်မျက်နှာ ကိုယ်စီတစ်ယောက်ကြည့်လို့ ရင်ခုန်သံထပ်တူကျတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်း
ကိုယ့်အနားရှိစေချင်လည်း ရွှေပင်လယ်ကြီး ဆီးကာထားလို့ တရွာခြားနေတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်း
အနက်ရှိုင်းဆုံး တံဆိပ်ခတ်ထားလို့ စက္ကန့်တိုင်းအတွက် ထာဝရ ဗယ်လင်တိုင်း
သူ မရိပ်မိလည်း တိတ်တိတ်ကြည်နူး အုံ့အုံ့ပုံးပုံး ပြုံးနေရတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်း
အချစ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှမမှားဘူး ဆိုတဲ့ ရူးရူးမိုက်မိုက် မူးမူးငိုက်ငိုက် ဗယ်လင်တိုင်း
နှလုံးသားထက် တခြားအရေးတွေခက်လို့ ဦးစားမပေးနိုင်သေးတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်း
တစ်ယောက်ကိုအဖြေပေးလိုက်လို့ နောက်တစ်ယောက်ကဆွေးရတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်း
ခံစားရသမျှ ဖွင့်ဟပြောမိလို့ ငယ်စာရင်းပျက်သွားတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်း
အသည်းနှလုံးစကားဝိုးတ၀ါး မကြားနိုင်သေးလို့ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်း
သူများပျော်လို့ မပျော်နိုင် သက်ပြင်းချကာ ရှာဖွေမှိုင်နေရတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်း
ဒီအချိန်ရောက်တိုင်းသတိရ အတိတ်က တစ္ဆေခြောက်နေတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်း
ရင်ခုန်သံတွေအေးစက် အကြည်ဓာတ်ပျက်သွားကြတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်း
ပြီးဆုံးသွားပေါ့ အစားထိုးမရ နောက်ကျသွားတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်း..…။
(တစ်ခုခုတော့ တိုက်ဆိုင်မှာပေါ့နော်။ တစ်ခုမကလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။)
Posted by pandora at 6:10 AM 10 comments
Posted by pandora at 11:40 PM3comments
ကိုပြည့်စုံ ၏ ဘလော့ဂ် မှ ကူးယူပါသည်။
Posted by pandora at 8:36 PM 1 comments
(တခါတလေလည်း ခဏတဖြုတ်တော့ ထွက်ပြေးချင်တာပေါ့။ ကဗျာကို ကဗျာလို သဘောထား။ အကြီးအကျယ်တွေ ဘာသာမပြန်ကြနဲ့ဦးနော်။)
ငါ့ရဲ့ ၀ိုင်ကလေးက ငယ်သေးသတဲ့
seal မဖောက်ဖို့နဲ့ .. အဲ.. စည်းမဖောက်ဖို့တော့ လိုမယ်
ငါပြောချင်တာတွေ ပြောထွက်ဖို့ ချောဆီ
ဟောဒီ ၀ိုင်ငယ်ငယ်ကလေးကို စီးပြီး
ကပ်ဆိုက် အကျပ်ရိုက် ကာလနာတိုက်
ဥပါဒ် အမှုပတ် လူ့ဇာတ်က ရှုပ်တယ်
မြန်မာငွေ ငါးသောင်းကျော် တန်သတဲ့
မင်းရော မှုလို့လား ဂျွန်
ဒီဆီမီးခွက်တွေ ထထ တောက်နေတာ
ပါးပါးကလေး ၀ါးလိုက်ပါ ဂျွန်
အာသာ မပြေတဲ့ ဘ၀တွေမှာ
ဟော.. စတော့ရှယ်ယာတွေ ဈေးလှုပ်သတဲ့
ဘလော့ဂါ တစ်ယောက် ခွေးဆွဲခံရသတဲ့
အိုကြီးအိုမိုက်တွေ သေခါနီးပြီ ပြောသတဲ့
ဒါ.. သတင်းတွေမှ မဟုတ်တော့ပဲ
ဘာမဆို အချိန်မရွေး ထဖြစ်သွားနိုင်သတဲ့
ရှုံးပြီး ရှင်ကျန်သူတွေကို ထားခဲ့တော့မယ်
ငါမပါတဲ့ ကမ္ဘာတွေ အတွက်
Good luck! Good luck! All the best!
ဘိုလိုမှုတ်ပြီး မူးဇာတိတွေပြ.. လို့
နိုင်ငံရေးအရမမှန်တဲ့ စကားတွေပြော.. လို့
ဟောဒီ ၀ိုင်မြစ်ကြီးက စီး… လို့
ယစ်လို့ ရစ်လို့ ယစ်လို့ ရစ်လို့ ယစ်လို့ ရစ်….လို့
Posted by pandora at 8:22 PM 18 comments
ပါဝါ တစ်ချက် အော့ဖ် လိုက်ရုံနဲ့လည်း
စိမ်းနေတဲ့ ဘ၀တွေက ရှပ်ဒေါင်း ဖြစ်မသွားဘူး
ကဗျာတစ်ပုဒ် ပရင့်ထုတ် သိမ်းထားလိုက်တယ်။
Posted by pandora at 9:49 AM0comments
သည် ပြူတင်းပေါက်ကလေးမှာ သူ ရပ်နေတာ တော်တော်ကြာသွားခဲ့ပြီ။ အဲသည်က လှမ်းကြည့်လိုက်လျှင် မြက်ခင်းစိမ်း ပတ်ချာဝိုင်းနေသော ကလေးကစားကွင်းကလေး။ ကလေးတသိုက် ဒန်းစီးကြ လျှောစီးကြ အမြင့်က လက်လွှတ်ခုန်ချကြ။ အော်ဟစ်သံ တွေကိုတော့ သူ သဲ့သဲ့သာ ကြားရသည်။ သည့်ထက် ခပ်လှမ်းလှမ်းကို မျှော်ကြည့်လိုက်လျှင် ကတ္တရာ လမ်းမတစ်ခု။ အဲသည့်နောက်ကို ဆက်ကြည့်လျှင် အလွန်မြို့ပြဆန်သော မြို့ကလေးနှင့် မအပ်စပ်တော့သလို ဖြစ်နေသော မြင်ကွင်းတစ်ခုကို မြင်ရတော့မည်။ ထင်းရှုးပင် တချို့နှင့် အခြား အမျိုးအမည်မသိ အပင်ကြီးများ ထိုးထိုးထောင်ထောင်။ ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်း ထူထူထပ်ထပ်။ ပြီးတော့ တောင်ကုန်းကလေး တစ်ခု။
သည်မြို့ကလေးမှာတော့ တော ဆိုသော အရာကို ဤပတ်ဝန်းကျင်ကလေးဖြင့်သာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရသည်။ လူလုပ်ထားသော တောအုပ် ထူထူလေးနှင့် ဤတောင်ကုန်းကလေး ကိုသာ သဘာ၀၀န်းကျင်ဟု သဘောထားကာ တောင်တက်ကြ အပန်းဖြေကြပေါ့။ သူက တောင်ကုန်းကလေးကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ အိမ်နှင့် သည်လောက် နီးပါလျှက် တောင်ကလေးကို သူတစ်ခါမှ တက်ရန် မကြိုးစားခဲ့။ သစ်ပင်တွေနားကို သူတစ်ခါမှ သွားရန် မကြိုးစားခဲ့။ သည်ပြူတင်းပေါက်က ရပ်ကြည့်ရင်း သူတွေးလေ့ရှိတာက တောင်ကုန်းလေးပေါ်က သစ်ပင်စိမ်းစိမ်းတွေ တနေ့နေ့ သူ့ဆီရွေ့လာမှာလား ဆိုတာပဲ ဖြစ်သည်။
၀ီလျံရှိတ်စပီးယား၏ မက်ကဘက် (Macbeth) ၀တ္တုထဲမှာ စုန်းမကြီးတွေက နိမိတ်ပေးခဲ့တာ သူဖတ်ခဲ့ဖူးသည်။ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးသော မက်ကဘက်က သူ့ကို နိုင်သူ ပေါ်လာမှာလား စိုးရိမ်ခဲ့။ စုန်းမတွေ အပြောအရ သစ်တောကြီး ရွေ့မလာမချင်း သူဟာလုံခြုံတယ် ဆိုပဲ။ ဘယ်အမိဝမ်းထဲက မွေးလာတဲ့ကလေးမှ သူ့ကို အန္တရာယ် မပေးနိုင် ဆိုပဲ။ မက်ကဘက်က စိတ်အေးသွားပြီး သူ့ကိုနိုင်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဟု ဆိုကာ ရယ်ပွဲဖွဲ့ခဲ့။ သူလည်း ၀တ္တုဇာတ်ကြောင်းနဲ့အတူ စီးမျောခဲ့။ ဖြစ်လာမှာလား ဖြစ်မလာဘူးလား။ တကယ် သတိပေးချင်တာလား။ ပေါ့ဆ သွားစေချင်တာလား။ အချက်အလက်တစ်ခုကို တင်ပြပုံတင်ပြနည်းနဲ့ ခံယူပုံခံယူနည်းဟာ ဘယ်လောက် အရေးကြီးကြောင်းကို သူအခုအချိန်အထိ ကောင်းကောင်း နားမလည်နိုင်သေးဟု ထင်မိသည်။
မနက်အိပ်ရာက နိုးလာလျှင် သူ့အတွက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ချိန်မရှိ။ ရေဒီယို နားထောင်ချိန်မရှိ။ အိမ်သူအိမ်သားနှင့် စကားဝိုင်းဖွဲ့ချိန်မရှိ။ (အိမ်သူအိမ်သားလည်းမရှိ။) ရေချိုး အ၀တ်အစားလဲ။ ပြီးတော့ ဘတ်စ်ကားတစ်စီးပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ လေးဆယ့်ငါးမိနစ်တာ ငိုက်မျည်းလူးလိမ့်တဲ့ ခရီးရှည်။ စက်ရုပ်ဆန်ဆန် မြို့ကလေးမှာ စက်ရုပ်ဆန်ဆန် ကူးခတ်နေတဲ့ တစ်နေ့တာ ဆိုတာ သူ့အတွက် ဘာများဆန်းလို့လဲ။ အလုပ်ကို ရောက်လျှင် သူ့ရဲ့ အနေအထိုင်မတတ်သော အတွင်းရေးမှုးမကလေးက သူ့ကို မင်္ဂလာ နံနက်ခင်းပါ ဟု လေသံပေါ့ပေါ့ကလေးဖြင့် ထိုင်ရာမထ နှုတ်ဆက်မည်။ သူကျင်လည်ခဲ့တဲ့ မွေးရပ်မြေက ရုံးတစ်ခုမှာလို လက်ထဲက ဖိုင်တွဲကို ခရီးဦးကြို လှမ်းယူသည်မရှိ။ ဆရာ ကော်ဖီလား လက်ဖက်ရည်လားဟင် ဟု ပျာပျာသလဲ သူ့ကို မေးရင်း ဂရုတစိုက် ပြင်ဆင်ပေးသည်မရှိ။ တကယ်တော့လည်း ဒါလောက်ကို သူ ၀မ်းနည်းမနေသင့်ပါလေ။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကတော့ ကွဲပြားမည် မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် သူ့ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက် ရုံးခန်းတွေက သူနဲ့ရာထူးတူ သို့သော် သူတို့လူမျိုးတူများ အတွက်တော့ သူတို့တွေက အနည်းငယ် ပို အလေးထား ဂရုစိုက်လေ့ ရှိသလားဆိုသော အတွေးကိုတော့ သူ့ခေါင်းထဲ ၀င်လာတိုင်း ပြန်ထွေးထွေးထုတ်ရသည်။
အတွင်းရေးမှုးမကလေး ဒီနေ့ စကပ်က သိပ်တိုနေမှာလား။ အကျီက လည်ပင်း သိပ်ဟိုက်နေမှာလား။ ကျောပေး ထိုင်နေရင်း ခါးနေရာက တစ်မိုက်လောက် လွတ်နေမှာလား။ မသိမသာ လှမ်းကြည့်ရင်း ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့် သူမြည်းမည်။ ကောင်မလေးက သတိထားမိဟန် မတူ။ သတိထားမိတောင် ရှက်ကိုးရှက်ကန်း မရှိ။ ဂရုစိုက်ဟန် မတူ။ ခဏကြာတော့ သူလည်း ဒါတွေကို မေ့သွားမည်။ ဖိုင်တွဲပေါင်းများစွာနှင့် အလုပ်ရှုပ်။ ကောင်မလေးက သူ့ရဲ့တနေ့တာ ချိန်းဆိုချက်များ ကို အီးမေးလ်ပို့လိုက် ဖုန်းဆက်လိုက်နှင့် သတိပေးမည်။ ညနေ ခြောက်နာရီ ဒေါင်ခနဲ ထိုးလျှင် ဘာလုပ်စရာ ကျန်သေးလဲဟု သူ့ကိုလာမေးမည်။ သူက ထုံးစံအတိုင်း ခေါင်းခါပြလျှင် ဘိုင့်ဘိုင် ဆီးယူတူမောရိုး ဟု လေသံပေါ့ကလေးဖြင့် နှုတ်ဆက်ပြန်သွား။ ခဏကြာလျှင် သူလည်း ကိစ္စတွေ လက်စသတ်။ အိမ်သယ်သင့်တာသယ်။ တနေရာရာမှာ ညစာဝင်စားပြီး အိမ်ပြန်ရောက်။ အခုလို ပြူတင်းပေါက်နား ခဏတဖြုတ် ရပ်ကြည့်ပေါ့။
ပြူတင်းပေါက်က ကြည့်နေရင်း သူ့အခန်းရှိရာ လှေခါးဘက်ကို တည့်တည့် လျှောက်လာသော သဏ္ဍာန်တစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရသည်။ လက်ထဲမှာ တစ်ခုခုကို ကိုင်ထားသည်။ ဒါ.. သူ့ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ပေပဲ။ အဲသည်လူကတော့ သူ့အပေါ် တော်တော် သံယောဇဉ်ကြီးသည်။ သူ့ကို မကြာခဏ ဖုန်းဆက်။ လာလည်။ အပြင်မှာ ၀ိုင်းဖွဲ့ကြတိုင်းလည်း မပျက်မကွက်ခေါ်။ သူကသာ အဲသည်လူထံ တစ်ခါမှ မရောက်ဖြစ်။
တံခါးက လူခေါ်ခေါင်းလောင်းသံ မြည်လာတော့ သူ အသာ ဖွင့်ပေးလိုက်ပါသည်။
“ကဲ ဘယ်လိုလဲ။ ပိတ်ရက်မှာ ဘာတွေလုပ်မလို့လဲဗျ။”
သူ့ပခုံးကို ခပ်ဖွဖွ လှမ်းပုတ်ရင်း သူ့မိတ်ဆွေက ဆိုသည်။ တကယ်တော့ ပခုံးပုတ်တာကို သူသိပ်မုန်းပါသည်။ သို့သော်… ထားလိုက်ပါတော့လေ။
“သည်လိုပါပဲဗျာ။ စာရေးစာဖတ်။ ဟိုငေးဒီငေးပေါ့။”
“သိတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့တော့ ၀ိုင်းဖွဲ့ကြမလို့။ ထုံးစံအတိုင်း ခင်ဗျား မလိုက်ပြန်ဘူး မဟုတ်လား။ တစ်ယောက်တည်း ပျင်းနေမှာစိုးလို့ လက်ဆောင်ကလေးတစ်ခု ယူလာတယ်။ ရော့။”
မိတ်ဆွေက သူ့ကို လက်ထဲက အရာတစ်ခု လှမ်းပေးလိုက်သည်။ လှောင်ချိုင့်ကလေး တစ်ခုပေပဲ။ အထဲမှာ ယုန် ညိုညိုကလေး။ မျက်လုံးပြူးကလေးဖြင့် သူ့ကို ကြည့်နေသည်။ သူက ပြန်ကြည့်တော့ နောက်ကို ခြေတစ်လှမ်း ခုန်ဆုတ်သွားသယောင်။ သူအနည်းငယ် စိတ်ရှုပ်ထွေးစွာ ပြီးတော့ ရယ်ချင်စွာ ..
“အာ.. ဘာလုပ်ရမှာလဲဗျ။ ကျွေးရမွေးရ အလုပ်ရှုပ် ပါဘိသနဲ့။”
“ဟုတ်တယ်လေ။ ဒါမှ ခင်ဗျား လုပ်စရာတစ်ခု ရမှာပေါ့။ ဒီအတိုင်း တစ်ယောက်တည်း နေနေရင် ခင်ဗျား ကြာရင် မလွယ်ဘူး။”
စကားအနည်းငယ် ပြောပြီး မိတ်ဆွေက နှုတ်ဆက်ပြန်သွားပါသည်။
သူက ယုန်ကလေးကို စေ့စေ့ကြည့်လိုက်သည်။ ကဲ.. အလုပ်ရှုပ်ဦးတော့မှာပေါ့။ မိတ်ဆွေ ထားခဲ့သော ကန်စွန်းရွက် အနည်းငယ်ကို ချကျွေးလိုက်တော့ ယုန်ကလေးက တမြုံ့မြုံ့ ၀ါးသည်။ သူ့ကို ရင်းနှီးလိုဟန် တစ်ချက်ကြည့်သည်။ သူက သူ့အခန်းကျဉ်း ကလေးကို လှည့်ပတ် ကြည့်လိုက်သည်။ ယုန်ကလေးကို လွှတ်ပေးထားရလျှင် ဘယ်လို နေမလဲ။ လျှောက်ပြီး အညစ်အကြေးစွန့်ဘာညာနှင့် သူသိမ်းဆည်း သန့်ရှင်းရ ပိုအလုပ် ရှုပ်ကောင်းရှုပ်မည်။ ညစ်ပတ်လျှင် ညစ်ပတ် မည်။ ယုန်ကလေးအတွက်တော့ ပိုလွတ်လပ်မည်ပေါ့။ သော့ခလောက်ကလေးကို သူဖွင့်လိုက်သည်။ ကဲ.. ကြိုက်ရာကို လျှောက်ပြေးပေတော့။
ဟိုသည် ပြေးနေသော ယုန်ကလေးကိုကြည့်ကာ သူ့စိတ်တွေက ယုန်ကလေးနှင့်အတူ ပြေးသည်။ သူ့မှာလည်း ယုန်မွေးလေးလို နူးညံ့ခဲ့သော အရေပြားတွေ၊ ဘောင်ခတ်ထားသော လောကကြီးကို အပြစ်မဲ့စွာ စူးစမ်းခဲ့သော မျက်လုံးပြူးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေ၊ ခုန်ဆွခုန်ဆွ ဖြစ်ခဲ့သော အိပ်မက်တွေ ရှိခဲ့မည်။ အခုတော့လည်း ဒါတွေအားလုံးဟာ….။
တအောင့်လောက်ကြာတော့ ခုတင်ပေါ်မှာ သူခဏလှဲမည် ပြင်သည်။ မီးပူ မတိုက်ရသေးသော အ၀တ်ပုံက သူ့ကျောအောက်မှာ ခိုးလိုးခုလု။ အ၀တ်များကို မကာ ဗီရိုထဲထည့်ရန် တံခါးကို ဖွင့်လိုက်သည်။ အ၀တ်ဗီရိုမှာ တစ်ခုခုက ညပ်နေသလို။ သူ အမှတ်မဲ့ အားနှင့် ဆွဲဖွင့်လိုက်သည်။ ခွပ်ခနဲ မြည်သွားသော အသံခပ်တိုးတိုး တစ်ခုနှင့်အတူ သူ နောက်ပြန်ယိုင်သွားတော့ ပျော့စိစိအရာကို တက်နင်းမိလိုက်သည်။
ဟာ.. သွားပြီ။ ဗီရိုတံခါးနှင့် နှာနုကို တည့်တည့်ရိုက်မိသွားသော ယုန်ကလေးက အသံပင် မထွက်နိုင်တော့။ ယုန်ကလေးက သူ့နောက်ကို လိုက်လာတာ သူမသိလိုက်။ ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ စမ်းကြည့်လိုက်တော့ ယုန်ကလေး သေနေပြီ။
စောစောက မိတ်ဆွေ စရောက်လာတဲ့ အချိန်နဲ့ ပြန်တွက်လိုက်လျှင် သိပ်မကြာ။ တစ်နာရီလောက်သာ။ ကြည့်စမ်း။ တစ်နာရီအတွင်းမှာ အပြစ်မရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေး တစ်ကောင် သူ့ပေါ့ဆမှုကြောင့် သေသွားခဲ့ပြီ။ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို Time Machine နှင့် ပြန် လည်ပတ်လို့ရလျှင် သူ ဆယ်မိနစ်စာလောက် ပြန်လှည့် လိုက်ချင်သည်။ ယုန်သေကောင်လေးကို အခန်းထောင့်ဆီ ယူလာပြီး ချကာ ခပ်ငိုင်ငိုင် ထိုင်ကြည့်နေမိသည်။
သူ ဘာလုပ်ရမလဲ။ မျက်စေ့က စားပွဲပေါ်က ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ကလေးဆီ ရောက်သွားသည်။ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ကို ဖွင့်လိုက်သည်။ ရှေ့က စာမျက်နှာများကို တဖျတ်ဖျတ် လှန်လိုက်သည်။ ရုံးစီမံချက်များ။ ချိန်းဆိုထားသော ရက်စွဲများ။ အချိန်များ။ ရေးသားချက် အားလုံးက သူ့မျက်စိရှေ့မှာ အပြားလိုက် အဖတ်လိုက်။ သည်နေ့တော့ ရုပ်လုံးကြွမည့် အကြောင်းအရာ တစ်ခု သူမှတ်မှတ်ရရ ရေးရတော့မည်။
သူ ယုန်သေကလေးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်း ဘောလ်ပဲန်ကို ကိုင်သည်။ “ သည်နေ့ ကို….. အိမ်ကို လာသည်။” ။ နိုး..နိုး မဟုတ်သေးဘူး။ သည်လူ လာတာက ဘာအရေးလဲ။ အဓိက ဇာတ်ကောင်က ယုန်ကလေးပေပဲ။ “ သည်နေ့ ယုန်ညိုကလေးတစ်ကောင် အိမ်ရောက်လာသည်။ လာပေးသူက ကို…. ဖြစ်သည်။” သူ့ စာကြောင်းအစကို သူကျေနပ်သွားသည်။ သည့်နောက် သူ့လက်က သွက်လက်စွာ.. စာကြောင်းများ တစ်ကြောင်းပြီး တစ်ကြောင်း..။
စာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာ ပြည့်သွားတော့ သူရပ်လိုက်သည်။ အကြောင်းအရာ အားလုံး ပါသွားပြီ။ ယုန်ကလေးက သူ့ကို သနားစရာ ဘယ်လိုကြည့်ပုံ။ နောက်ဆုံး ယုန်ကလေး ပျော့စိစိ အသက်ထွက်သွားပုံ အထိ။ သူ တစ်ခေါက် အစအဆုံးပြန်ဖတ်သည်။ သူ့စိတ် တစ်ပြင်လုံးက စာထဲမှာသာ။ ကြည့်စမ်း ဒီနေ့တော့ တစ်ခု ထူးခြားသွားပြီ။ အဓိပ္ပာယ် ပိုရှိသွားသလိုပေါ့။ ဒါမှ ဒိုင်ယာရီဆိုတာ…။ သူဖွဖွပြုံးကာ လေတစ်ချက် ချွန်လိုက်မိသည်။ ရွှီ…။
ရွှီ…။ အားးးးးးး… သူအလန့်တကြား ချက်ချင်း ထခုန်လိုက်သည်။ သေတော့မှာပဲ။ သူ့လေချွန်သံက သူ့နားထဲက ပြန်မထွက်။ ဘာကြောင့် သူက အခုမှ ပေါ့ပါး ပျော်ရွှင် နေခဲ့ရတာလဲ။ မိတ်ဆွေကို သတိရမိကာ အထပ်ထပ် ကျိန်ဆဲနေမိသည်။ ဟာ.. ဒါလည်း မဟုတ်သေးဘူးလေ။ မိတ်ဆွေက စေတနာကောင်းနဲ့ သူပျင်းနေမှာစိုးလို့ လာပေးခဲ့တာ မဟုတ်လား။ သူကသာ ပေါ့ဆစွာ…။ ယုန်ကလေး တစ်ကောင်ရဲ့အသက်…။ တကယ်လို့ ယုန်ကလေး မသေခဲ့ဘူး ဆိုရင်ရော.. ။ ဒါလည်း မဟုတ်သေးပြန်ဘူး။ သူ့ကြမ္မာနဲ့သူ ဖြစ်တတ်တာပဲလေ။ သူ တစ်ခုခုကို မကျေမနပ်စိတ်က ရင့်သထက် ရင့်လာသည်။ အမှားအယွင်းက ဘယ်မှာပါလိမ့်။ သူက အခုလို အားပါးတရ မှတ်တမ်းတင်လို့။ ယုန်ကလေး တစ်ကောင် ရောက်လာတယ် ပြီးတော့ သေသွားတယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဟာ လူတစ်ဦးအတွက် တစ်နေ့တာ ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့တာလား။ အဲဒါဆို သူက…။
ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ကလေးကို မြွေတစ်ကောင်လို ကြောက်လန့်ရွံရှာစွာ အလန့်တကြား အခန်းထောင့်သို့ ပစ်ပေါက်လိုက်သည်။ တုတ်တုတ်ပင် မလှုပ်သော ယုန်ကလေး အနားမှာ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ကလေးလည်း အားပျော့စွာ ခွေလဲကျ....။
ပြီးပြီ….။ အားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီ။ ရင်ထဲ တလှပ်လှပ် ဖြစ်လာသည်။ အခုတော့လည်း အားလုံး အရင်လို….။ ပြူတင်းပေါက် ရှိရာသို့ လျှောက်လာမိသည်။ ဟော ဟိုမှာ.. မှောင်ရီသန်းနေတဲ့ ကလေးကစားကွင်း။ ကတ္တရာလမ်းမ။ တောင်ကုန်းကလေး။ သစ်ပင်စိမ်းစိမ်း။ သစ်ပင်တွေ.. သစ်ပင်တွေ…. သူ့ဆီရွေ့လာဦးမှာလား။ ရွေ့လာဦးမှာလား။ ရွေ့.. လာ.. ဦး.. မှာ.. လား။ သူ့ရင်ထဲမှာ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်။ ပြူတင်းပေါက်ဘောင်ကို လက်ထောက်ကာ မျက်နှာကို အုပ်ပြီး သူ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ငိုကြွေးလိုက်လေသည်။
Posted by pandora at 2:41 PM 11 comments
ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေအကြား ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ စနောက်ကြရင်း "မြို့စားကြီးနေဘုန်းလတ်" လို့ နာမည်တွင်ခဲ့တဲ့သူ။ မနှစ်က ဒီလိုနေ့မှာပဲ "လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်" ဘလော့ဂ်လေးကို သူကိုယ်တိုင် အသက်သွင်းခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ တော့ တစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်သွားပြီပေါ့။ မှတ်မှတ်ရရ သူ့ဘလော့ဂ်မှာ ပထမဆုံးတင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်နာမည်ကလည်း "လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်" တဲ့။
လက်တွေ့ဘဝမှာ သူလွတ်ကျခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ၊ ဒါမှမဟုတ် အနုပညာသမားဆိုတဲ့ အမည်နာမတွေအတွက် သူ့ ဘလော့ဂ်ဟာ သစ္စာရှိတဲ့ လူယုံ၊ အစွမ်းထက်တဲ့ လက်နက်၊ အရိပ်ကောင်းတဲ့ ညောင်သစ်ပင်လို အသုံးတော်ခံခဲ့တယ်။ ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်အတွင်းမှာ သူ့ မြို့တော်က စာကောင်းစာသန့် ၁၂၂ ပုဒ် မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီစာတွေကြောင့် ဖတ်သူတွေအတွက် သုတပန်းတွေ လန်းလာခဲ့တယ် ၊ ရသလမ်းတွေ ဆန်းလာခဲ့တယ် ၊ ပညာမီးတွေ လင်းပလာခဲ့တယ် ။ သူကတော့ သတိထားမိချင်မှ ထားမိလိမ့်မယ်။
ဘလော့ဂါတွေ အတွက် ပထမဆုံးဆိုတဲ့ စကားလုံးတော်တော်များများမှာ သူနဲ့ လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်လည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေကို ပထမဆုံး ပုံနှိပ်မယ့်စာအုပ်အတွက် တက်တက်ကြွကြွနဲ့ သူ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ စာအုပ်ကိစ္စ ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းကို မပျက်မကွက် တက်ရောက်ခဲ့သူဟာလည်း သူ တစ်ဦးတည်း ရှိခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး ရန်ကုန်မှာ ပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ Blog Day Seminar အတွက်လည်း သူ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ MRTV4 နဲ့ အခြားသော မီဒီယာတွေအကြားမှာ ဘလော့ဂ်လောက အကြောင်းကို သူချပြရဲခဲ့တယ်။ ဝေဖန်မှုတွေကို လက်ခံခဲ့တယ်။ မေးခွန်းတွေကို အပြုံးနဲ့ ဖြေကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
မြန်မာဘလော့ဂါရပ်ဝန်းမှာ ဓလေ့ထုံးတမ်းတစ်ခုရှိတာက ဘလော့ဂ်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ အထိမ်းအမှတ်နေ့တွေမှာ အထူးရေးသားတဲ့ ပို့စ်တွေ တင်တတ်ကြတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေက လာနှုတ်ဆက်ကြတယ်၊ Comment တွေ ချီးမြှင့်ကြတယ်။
ဒီနေ့ သူ့ ရင်နဲ့ တည်ထားတဲ့ မြို့တော်ကြီး တစ်နှစ်ပြည့်တယ်။ ခုလိုအချိန်မှာ သူသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားခွင့်ရမယ်ဆိုရင် သူ့ဘလော့ဂ်အတွက် အထိမ်းအမှတ်ပို့စ်တင်မယ့် အစီအစဉ်ရှိမယ်ဆိုတာ အသေအချာပဲ။
ဒါပေမယ့် သူ … ဘယ်မှာလဲ ။ သူရေးမယ့် ပို့စ်မှာ Comment ရေးဖို့ ဘလောဂါ့ရပ်ဝန်းက သူငယ်ချင်းတွေ သူ့ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်တကြီး စောင့်နေကြတယ်။ " မြို့စားကြီး " လို့ စနောက်ကြဖို့ စောင့်နေကြတယ် … ဇန်နဝါရီ ၂၉ ကတည်းက ခြောက်သွေ့နေခဲ့ရတဲ့ သူ့ မြို့တော်မှာ အပြုံးတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေစေချင်တာ … ရယ်သံတွေနဲ့ စည်ညံနေစေချင်တာ … ဒါတွေအတွက် အားလုံးက စောင့်မျှော်နေဆဲပါ ..။
ဘလော့ဂါတွေကို ချစ်ကြည်စေချင်တဲ့ သူ့အတွက်၊ လူငယ်တွေကို ကောင်းစေချင်တဲ့ သူ့ အတွက်၊ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ သူ့ အတွက် ဘေးဒုက္ခဆိုတာ မြူတစ်မှုန်စာတောင် ကျရောက်မလာစေဖို့ ဘလောဂါ့ရပ်ဝန်းမှ ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးက ဒီအမှတ်တရ ပို့စ်လေးနဲ့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by pandora at 12:12 AM 1 comments